Abavelisi bemitha yombane we-elektroniki ohlawulelwayo- I-China ihlawulelwa ngombane ngeMitha yamandla e-elektroniki, Factory
Inkonzo yeeyure ezingama-24
Icandelo lokufumana idatha
Imitha yedreyini yombane yombane
I-3Phase 4wire imitha yamandla
3Phase 4wire imitha yamandla (ikhadi le-ic)
3Phase 4wire imitha yamandla （ukude）
I-din kaloliwe yesigaba esinye samitha samandla
Inqanaba elinye din kwimitha yamandla kaloliwe （indawo yokuhlala）
Inqanaba elinye leemitha zamandla kaloliwe （ikhadi le-ic)
Inqanaba elinye din kwimitha yamandla kaloliwe （kude）
Imitha yamandla e-elektroniki ahlukeneyo
Isigaba esithathu se-lcd sangaphakathi esibonisiweyo sokwenza imitha yamandla e-elektroniki ngemisebenzi ene-rs485
Ukubeka esweni isiginali
Amandla okubeka esweni amandla ombane (gprs.lora)
Amandla okubeka esweni amandla ombane (iziteshi ezi-4)
Ukusebenza ngemitha yombane
Isigaba esinye semitha yamandla e-elektroniki
Inqanaba elinye lilula leemitha zamandla ombane
Amanqanaba amathathu emisebenzi ye-elektroniki enamacandelo amathathu
Imitha yombane ohlawulelwa kwangaphambili
I-3Phase 4wire imitha yamandla ahlawulelweyo (ikhadi le-ic)
I-3Phase 4wire imitha yamandla ahlawulelwayo (kude)
I-3Phase imitha yamandla ahlawulelweyo (ikhadi le-ic)
Inqanaba elinye leemitha zamandla ombane card ikhadi le-ic + imodyuli
Inqanaba elinye lombane we-elektroniki imitha （ikhadi le-）
Imitha yamandla esigaba esinye （kude + kwimodyuli
Imitha yamandla esigaba esinye （ukude）
Inqanaba elinye lokuhlawula imitha yamandla card ikhadi le-）
Isigaba esinye semitha yamandla ombane
Amanqanaba amathathu emitha yombane
Amanqanaba amathathu emitha yamandla ombane （ithwala, ilora, gprs）
Ikhadi le-Ic elikhokhela imitha yamanzi ngaphambili
Imitha yokuhambisa amanzi eyi-smart
Isigaba esinye se-elektroniki ...
Amanqanaba amathathu e-elektroniki ...
Inqanaba elinye elilula-f ...
Ukusebenza kwamandla ombane ...
Isigaba esithathu se-LCD singene kwi ...
Din uloliwe isigaba esinye amandla ...
I-3phase 4wire imitha yamandla (kude) yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwepheshe be-GB / T17215.321-2008 kunye ne-GB / T17215.323-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
I-3phase 4wire imitha yamandla ahlawulelwayo (ikhadi le-IC) yinto entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008 kunye ne-GB / T17215.323-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yombane ohlawulelwa ngesigaba esinye samandla (ikhadi le-IC) yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yombane yesigaba esinye (kude) yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yombane yesigaba esinye (imodyuli ekude) yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yombane yesigaba esinye samandla ombane (ikhadi le-IC) yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yombane yesigaba esinye samandla ombane (ikhadi le-IC + imodyuli) yimveliso entsha yokulinganisa amandla eveliswe yaze yaveliswa yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.321-2008. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Imitha yamandla e-3phase (ikhadi le-IC) yinto emiselweyo yokulinganisa amandla emveliso eveliswe yinkampani yethu ngokobuchwephesha be-GB / T17215.301-2007, DL / T614-2007 kunye ne-DL / T645-2007. Le mveliso isebenzisa imijikelezo emikhulu edityanisiweyo kunye neendlela zeSMT, kunye nemisebenzi efana nokulinganisa amandla ombane, ukuqhubekeka kwedatha, ukujonga ixesha lokwenyani, kunye nokusebenzisana kolwazi.
Hayi. 256, Xincheng Road, Huankeyuan, Yixing, Wuxi, Jiangsu, China
Ngemibuzo malunga neemveliso zethu, nceda ushiye i-imeyile yakho kuthi kwaye unxibelelane nathi ngaphakathi kweiyure ezingama-24.